Onye ọ bụla hụrụ ọsọ mgbe ọ na-abịa na-arụ ọrụ ha Android igwe. A na-enwekarị nsogbu na-emekpa ọtụtụ gam akporo ọrụ bụ na ha igwe na-amalite na lag anya. Ọtụtụ ala mmefu ego gam akporo igwe nwere 1 GB nke Ram, nke bụ ukwuu mgbe ọ na-abịa na-ejizi dị iche iche aga-eme.
Ya mere, gịnị ka ị na-eme?
Iji na-gị Android ike na ngwa ngwa, ị ga-wụnye ezi-atọ ndị ọzọ ịba uru software. The ịba uru software ga-enwe ike ikpochapụ cache, kuki, Ram na-enweghị isi faịlụ. Ndị a dị mfe ihe nwere ike melite ọsọ nke gị android ka ukwuu. Ebe a na-top 10 ngwa ọdịnala na adị gị Android:
1. Clean nna ukwu
Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị tụkwasịrị obi software dị na Google Market. Ọ na-enyere mee ngwangwa ma hichaa ị ekwentị. Ọzọkwa, ọ na-enye ezigbo oge nchebe.
Accelerates, dị ọcha, ma na-echebe ekwentị na antivirus engine.
Pụrụ iche atụmatụ dị ka AppLock, oyiri remover, na junk ihicha.
Ọ nwekwara ike cools CPU site na mbenata ndabere ngwa.
Na-enyere aka mbo mbuli egwuregwu ọsọ site 30 percent.
Nọgidere Na-eme notifying maka mbipụta.
Notifies ọrụ nke a ọtụtụ ihe na ọrụ nwere ike na-adịghị mkpa. Ọ bụrụ na overdoing bụ a nsogbu, dị ọcha nna ukwu na-eme ka onye ahụ.
2. nnyemaaka maka Android
Ọ bụ otu n'ime ihe kasị ike software dị na ahịa taa. Ọ nwere oké management ngwaọrụ iji melite arụmọrụ nke ekwentị.
E nwere ihe fọrọ nke nta 18 atụmatụ
Ọ na Monitors ọnọdụ nke SPU, Ram, ROM, SD kaadị na batrị.
-Enye ndị ọzọ akara na ọtụtụ ọrụ dị ka ike nchekwa, Njikwa faili, ogbe uninstall na ọtụtụ ndị ọzọ.
Na-eme na-agba ọsọ a ndabere na mmetụta batrị
Manụ mgbasa ozi nwere ike igbochi igodo.
Okosobo cache, kuki, ndekọ, enweghị isi faịlụ, na ejibeghi ngwa ole na ole taps
Otu click agbam ume atụmatụ
Ọ pụrụ ime ka faịlụ transfer na kọmputa mfe
Lekwasị anya ọzọ na rụọ arụmọrụ, n'ihi ya ọ bụghị ọtụtụ ịba uru atụmatụ.
Ọ dịghị ezigbo oge ọnọdụ nlekota oru.
4. Booster maka Android
App dị ukwuu boosting na ike izoputa. The software bụ kọmpat kpam mgbasa ozi-free na pụrụ iche na atụmatụ dị ka akpaka mmechi nke ndabere ngwa, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Navigation dị mfe.
Ngwa ngwa tọhapụrụ na ebe nchekwa na boosts igwe.
Na-achọpụta rụọ batrị ọnọdụ na ozugbo na kwa ojiji oge nke-enye gị na-ebuli gị ekwentị ndụ batrị.
Ọ dịghị advertisement plugins.
Ya mgbe niile notifies ị ka mepụta njikarịcha.
5. Ọkara Cleaner na batrị nchekwa
Ọkara a maara ika na ngwaọrụ ịba uru software. Ọ ike ọzọ ohere, zọpụta batrị, belata data ojiji, na-agba na-akpaghị aka. Ọzọkwa, ọ na-enye ezigbo oge ọnọdụ nke ekwentị gị.
Ọ na-eme niile na ọrụ metụtara arụmọrụ mma.
Ọ na-akpaghị aka ọcha ị ekwentị na mgbe niile.
Ọ bụ otu nkwụsị ihe niile na-ịba uru mkpa.
Ọ dị mfe iji na-enye ndị ọzọ akara n'elu data ị dị ọcha.
Ọ dịghị mwepu nhọrọ maka kpọmkwem ngwa.
Eri ọzọ batrị.
6. ebe nchekwa Booster
A na ngwa ọzọ bụ uche n'ihe n'imeziwanye ọsọ nke ị android ngwaọrụ site na idozi ebe nchekwa mbipụta. Ebe nchekwa booster egosi na ị na ọkwa ebe nchekwa ekwentị gị na ozugbo.
Real oge Ram ojiji
Cache ihicha, ọrụ na-egbu, na akpaaka agbam ume na usoro Ama bụ isi atụmatụ nke ya.
One-mgbata ngwa ngwa agbam ume.
Ị nwere ike ịtọ akpaaka agbam ume nkeji, na nbata-uzọ
Anya obere oge ochie
Enwereghị ngwa management atụmatụ.
7. 1-Kpatụ Cleaner
App ọcha niile cache, search akụkọ, dị iche iche ndekọ. Iji a software, ị ga-enwe ike iji nweta ọzọ ohere na ngwaọrụ gị.
Anọ cleaners bụ na-agụnye dị ka cache Cleaner, akụkọ ihe mere eme Cleaner, oku na-aga / ederede log Cleaner na defaults Cleaner.
Okosobo cached faịlụ, data faịlụ, na search akụkọ ihe mere eme ndia.
E nwere ọtụtụ atụmatụ na ị nwere ike iri uru.
Imewe bụ oge ochie.
Ọ bụ ihe na ngwa ndị optimizes na ọcha. Ọ na-nwere wuru na-antivirus atụmatụ. Ọ okosobo cache na ndị ọzọ na junk data, na-egbu ọrụ, na boosts Ram.
Ọ na-agụnye Cleaner, booster na antivirus.
Nga setịpụrụ akpaka ihicha nke junk faịlụ.
Ọ nwere ike na-amụba ọsọ ruo 60 percent.
Ọ nwere ike na rụọ ọrụ nke ọma chọpụta virus na Trojan
Ọ uzo batrị 20 percent ngwa ngwa
Ọ dịghị autoboost
Piriform a maara ụlọ ọrụ na-eke PC na Mac nhicha software. A na ngwa na-emekwara otu irè ọrụ nke nhicha junk, boosting ọsọ, nlekota usoro na-eme nchọgharị n'enweghị.
Ọcha cache, nchọgharị akụkọ ihe mere, download nchekwa, clipboard na ọtụtụ ndị ọzọ.
Deletes ndekọ dị ka oku na SMS na nnukwu ma ọ bụ n'otu n'otu.
Iwepụ multiple achọghị ngwa.
Ọ dịghị virus ihicha atụmatụ
Ndokwa ihicha na-efu.
10. Cleaner- nna ukwu Speed ​​Booster
A na ngwa dị ukwuu ma ọ bụrụ na ị na-achọ ezi ihe ụfọdụ batter azọpụta atụmatụ. Ọ na-mma ọsọ na ala. Ọ nwere ike na ọcha na ebe nchekwa, junk, agbam ume egwuregwu gbapụrụ ọsọ, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ọ na-eburu nile bụ isi atụmatụ nke a Cleaner na booster.
Mma Ịgba Cha Cha arụmọrụ
Ọ na-enye mma ngwa management.
Na-efu onye aka wijetị
Ọ dịghị ọcha ndepụta ngwa.
Mkpa ka ị na-enweta ihe na ngwa na-ọcha gị gam akporo ngwaọrụ ngwa ngwa na n'ụzọ dị mfe. Nke a ga-hụ na gị na ekwentị adịghị akwụsịlata ma i nwere ike iji ya dị nnọọ ụzọ ị mere mgbe mbụ ị zụọ ya. More, nri ngwa pụrụ inyere gị aka jirichaa arụpụtaghị na-enwe ahụmahụ nke owning ihe Android ekwentị.
Olee otú Hichapụ Android oyiri Ndi ana-akpo
> Resource> Android> 10 Great égwu na adị gị akporo ekwentị